प्रयोग मा मेक्सिको: एक परिचय मेरो ल्याटिन जीवन
Posted on 09.03.2019, 21:23 By Goodsite
आफ्नो जाओ-गर्न ल्याटिन अमेरिका. यात्रा, साहसिक, व्यापार, डेटिङ र खतरा मेक्सिको मा, केन्द्रीय र दक्षिण अमेरिका । एक मानिस रूपमा, पहिलो कुरा तपाईं देख्नुहुन्छ बारेमा चकमक प्रयोग मेक्सिको मा छ यो सरासर राशि मिल्न तपाईं प्राप्त छौँ. बालिका यहाँ हुन लाग्न सक्छ अधिक लागि सफा सही र कुराहरु भन्दा बालिका, उत्तर अमेरिका वा युरोप. म एक पल्ट थियो एक अमेरिकी थियो जो मिति सेट अप प्रत्येक रात सप्ताह को लागि दस दिन छ । र उहाँले कुनै एरिजोना सूर्यास्त छ । यो बिन्दु छ कि एक उत्कृष्ट उपकरण हुन सक्छ लागि माथि र सामाजिक सञ्जाल मेक्सिको मा. विशेष मेक्सिको शहर । सामान्य मा, नै काम गर्छ यहाँ छ रूपमा यो गर्छ: मिलानको (जस्तै शाब्दिक काठ मिल्न) बाल्न तातो र छिटो — मा शुरू संग सम्पर्क एक गला, त्यो पाउन छौँ अर्को पूरा गर्न उनको ध्यान लागि आवश्यकता धेरै छिटो छ । तर केही कुराहरू छन् जोड गर्न आफ्नो प्रोफाइल मा यहाँ हुन सक्छ कि छैन विचार गर्न मा फिर्ता आफ्नो घर देश । यो एउटा महत्त्वपूर्ण नियम: जब मा मेक्सिको, सधैं अडिग अंग्रेजी नभएसम्म तपाईं पूर्ण मा धाराप्रवाह अङ्ग्रेजी.
निस्सन्देह, तर किन समस्या माध्यम जान छ । त्यहाँ कुनै अभाव बालिका को यहाँ जस्तै जो विदेशीहरू र चिन्तित छन्, बोल्न अंग्रेजी — विशेष गरी मा, — त्यसैले भित्र खेल्न भनेर क्षेत्र छ । द्वारा मात्र प्रयोग अंग्रेजी, बाहिर फिल्टर बालिका जो तपाईं गर्न सक्षम छैन एक अर्थपूर्ण कुराकानी जसरी र आकर्षित गर्ने यिनै हुन्, पहिले नै गर्न रुचि र तपाईं आफ्नो स्थिति एक विदेशीले रूपमा. भनेर, र तपाईं देख्नुहुनेछ एक पुरा धेरै कम भने तपाईं माथि देखाउन मिति र तपाईं छैनन् वास्तवमा गर्न सक्षम छ एक केटी संग कुराकानी. सजिलो फिल्टर सिस्टम छ बस समावेश को एक विवरण आफैलाई अंग्रेजी मा आफ्नो प्रोफाइल मा समावेश छ भनेर के देश तपाईं देखि हो. यो महत्त्वपूर्ण छ बालिका सबै दुनिया भर, तर विशेष गरी यति मा मेक्सिको. जबकि मा मेक्सिको सिटी मा, बालिका हुनेछ निरन्तर सोध्न तपाईं कसरी अग्लो तपाईं छन्. जहाँ एक देश मा सबैभन्दा दोस्तों छोटो छन्, यो छैन पूर्णरुपले अचम्मको कि यो केटीहरूलाई चाहनुहुन्छ जो कसैले अझै पनि देख्न भन्दा आफ्नो टाउको हुनुहुन्छ भने एडी मा.
वा भन्दा, समावेश यो सही आफ्नो प्रोफाइल मा
तिनीहरूलाई बचाउँछ समय. छन् भने तपाईं कुनै पनि छोटो छ, तर, म चाहन्छु. यस लागि, राम्रो वा बुरा, रूपमा सेवा गर्दैछन् सामाजिक प्रमाण जताततै. मेक्सिको कुनै फरक छ । एक वा दुई तस्वीर अधिकतम, र अधिमानतः अधिक संग एक केटी छ । तपाईं हेर्न चाहँदैनन् छ जस्तै तपाईं को एक गुच्छा को तस्वीर संग तपाईं आफ्नो एक्स-प्रेमिका मा आफ्नो प्रोफाइल. म सिफारिस चाहन्छु यो मान्छे को लागि देख को लागि एक अधिक गम्भीर सम्बन्ध छ, हुनत. बालिका मा मेक्सिकन कामदेव सामान्यतया अधिक परम्परागत भन्दा के तपाईं चाहन्छु पत्ता मा (गुणस्तर महिला बारेमा छ) नै हो । खैर, गर्नुपर्छ भनेर एक राम्रो सुरुवात हो । सबै साधारण अर्थमा, साँच्चै. तपाईं निर्णय पनि भने पूरा गर्न कुनै पनि संग आफ्नो मिलानको, छ अझै पनि एक ठूलो तरिका पत्ता लगाउन बारेमा केही राम्रो बारहरू र रेस्टुरेन्ट को आफ्नो क्षेत्र मा, वा केही भन्दासानो-ज्ञात पर्यटक आकर्षण छ । चाहनुहुन्छ अधिक बारेमा जानकारी छ । बाहिर जाँच: कसरी नक्कली आफ्नो स्थान र पूरा बालिका देखि सबै भन्दा ल्याटिन अमेरिका
← सौन्दर्य को एक घर मा ब्राजील: एक चयन चित्रहरु ।
र मेक्सिकन च्याट शहर मेक्सिकन च्याट कोठा →
© 2020 भिडियो च्याट मेक्सिको